यसकारण सर्यो कांग्रेसको महासमिति बैठक ! यस्तो छ नयाँ बस्ने बैठकको मिति::Hamrodamak.com
यसकारण सर्यो कांग्रेसको महासमिति बैठक ! यस्तो छ नयाँ बस्ने बैठकको मिति
काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक सरेको छ। तिहार, छठलगायतका चाडपर्वहरू संघारमा अाएकोले महासमिति बैठकको मिति सारिएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
यसअघि कांग्रेस महासमितिको बैठक आगामी मंसिर ५ देखि ९ सम्मका लागि तोकिएको थियो । अबको बैठक आगामी मंसिर २८ गतेदेखि पुस ३ गतेसम्म बस्ने छ ।
मंगलबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। सोहि बैठकले पार्टी उपसभापतिमा विजयकुमार गच्छदार मनोनित गर्ने निर्णय गरेको छ।